Maitiro Ekuita neYakareba Kutumira Nguva Kana Kudonhedza? - Sarudza yako Kudonhedza Mentors kweDropshipping Course
Academy Delivery Time Shipping
Maitiro Ekuita neYakareba Kutumira Nguva Kana Kudonhedza?
Unogona kunetseka nezve kana kusangana neakareba ekutumira nguva maodha pamwe neiyo inodonhedza modhi nechikonzero chekuti iwe haugone kudzora yenguva yekutakura. Kana iyo nguva yekutumira yakarebesa, unogona kunyunyuta nevatengi vako, kunyangwe iine pesvedzero yakaipa pakutengesa kwako. Nekudaro, pane dzimwe nzira dzekuita nani dhizaina yakareba kutumira nguva. Chinyorwa chino chichaunza zvakajairika nguva dzekutakura, kukosha kwenguva dzekutakura, uye maitiro ekubata nenguva refu dzekutakura kana kudonhedza.
Yakajairika Yekutumira Nguva
Nguva dzekutumira dzinoenderana nekuti chinhu chacho chinotumirwa kubva kupi chaizvo uye nekwairi kuenda. Kazhinji, kana iwe uri kutumira kuUnited States neAliexpress, kutumira nguva dzose kunenge kuri mazuva 19-39 uye kana ukaita ePacket, ichave mazuva gumi nemaviri kusvika gumi nemaviri. Idzi inguva dzakareba kwazvo dzekutumira. Dzimwe nguva, kana iwe uri kutumira kunze kweUnited States, iko kutumira kunogona kureba semazuva makumi matanhatu. Uye kana pasuru ikarasika, ichave anopfuura mazuva makumi matanhatu. Pane peji rewebhu kuti iwe unogona kuverenga nguva yekutakura zvinoenderana nehuremu hwechinhu uye saizi pamwe nekwauri kuenda nenzira dzakasiyana dzekutakura. Uye zvinoratidza kuti CJ dzakateedzana dzinokurumidza uye dzakachipa nekusiyana.
Kukosha Kwekutumira Nguva
Zviripachena kuti nguva dzekutakura dzakakosha. Vatengi vava kujaira kutumira zvakanyanya mazuva ano, kunyanya neAmazon Prime delivery, saka zvinoita sekunge kusashivirira kwenguva refu yekutakura nguva. Kazhinji, iyo yakareba vatengi vako vakamirira yavo odha, iyo yakakura mukana ndeyekuti ivo vari kuzokumbira kudzorerwa.
Nekudaro, nguva refu yekutakura hainyatso kuita mushe pakutengesa kwako kana ukabata navo nemazvo. Zvichienzaniswa nekufunganya nezvenguva refu yekutakura, iwe zvirinani uzive maitiro ekuita nenguva refu dzekutumira kana uchidonhedza, ipapo nguva refu yekutakura haizodzikise huwandu hweshanduko.
Nzira dzeKubata Nenguva Yakareba yekutumira
1. Sarudza Right Rokutumira Nzira Uye Vatengesi
Nzira yakanakisa yekubata nenguva dzakareba dzekutumira kana kudonhedza ndeye kushandisa nzira dzinokurumidza kutumira, senge kushandisa CJPacket uye ePacket iyo inopa inokurumidza uye isingadhuri nzira yekutakura yemapakeji akareruka, kana aripo uye kutarisa kana iwe uchigona kuwana mupi yakaderera nguva yekugadzirisa. Nguva yekugadzirisa ingangoita iyo nguva yainotora mutengesi wako asati atumira odha. Iyo yakaderera iyo nguva yekugadzirisa, ipfupi nguva yekuendesa yemutengi wako. Kazhinji, nguva yekugadzirisa iri pakati pemazuva 1-7, ane hukama nezvigadzirwa uye vanotengesa. Iwe unogona kukumbira vatengesi vako yenguva yekugadzirisa, uye tarisa kana paine vatengesi vanoshandisa ipfupi nguva yekugadzirisa yezvigadzirwa zvakafanana. Uye zvakare, iri zano rakanaka kusarudza vatengesi vanokwanisa kutumira nemitengo isingadhuri, inokurumidza.
2. Ita Shipping Times Transparent
Iwe unofanirwa kuve wakatendeseka nezvenguva dzako dzekutumira. Usaite kuti nguva dzako dzekutumira dzive chakavanzika. Kana icho chigadzirwa chakakodzera kumirirwa, mutengi haazove nehanya nezve nguva yekutumira yawataura uye ivo vane kugadzirira kwepfungwa. Nekudaro, kana iwe ukasataura chero kupi pane yako saiti kana maemail nezve nguva dzekutakura, vatengi vanozogumbuka vofunga kuti vari kubiridzirwa, izvo zvinogona kukanganisa bhizinesi rako rekudonha.
Saka, sei kunyora nezve yako nguva yekutumira uye kupi kwekunyora nguva dzako dzekutumira?
Unogona kuve nerondedzero yakadai kuratidza nguva dzako dzekutumira, "Tinoziva kuti kukurumidza kuendesa kwakakosha kwauri uye tiri kushanda nesimba kuti tiite izvozvo. Asi ndokumbirawo uve nemoyo murefu, mirairo yese inowanzoendeswa kunze kwemaawa makumi manomwe nemaviri uye inotora approx. 72-2 mavhiki kusvika kubva mukutakura. ”.
Kune nzvimbo dzakawanda dzaunogona kunyora yako nguva yekutumira:
Pane peji rako reFAQ. Unogona kutaura nguva dzako dzekutumira pasi pemubvunzo wakadai "Ndingawana rini pasuru yangu?".
Pane yako Chigadzirwa Tsananguro. Iwe unogona kuwedzera yako nguva yekutumira kune chako chigadzirwa tsananguro. Kana iwe unogona kuratidza anofungidzirwa zuva rekutakura.
On iyo peji rekusimbisa reodha. Iwe unogona kuisa nguva yekutumira mushure meodhi reodhi pane peji reodhi yekusimbisa, pamwe nekuratidza basa rako repachokwadi.
Kutumira Policy. Unogona kuwedzera Kutumira Policy kuchitoro chako, senge Refund Policy yako. Ipapo iwe unogona kuve neruzivo rwese nezve yako kutumira mukati imomo.
In iyo email yekusimbisa yekutumira. Iwe unogona zvakare kuwedzera nguva dzekutumira mune email yekusimbisa yekutumira.
3.Have Good Customer Sservice
Kuva nebasa rakanaka revatengi inzira inoshanda yekutarisana nenguva dzakareba dzekutumira. Kuteedzera kwevatengi kunogona kugadzira kana kutyora ramangwana rechitoro chako chinodonhedza.
Pindura kune vatengi ASPS
Dzimwe nguva, vatengi vanogona kubvunza mibvunzo senge pane avo mapakeji, iwe unofanirwa kugara uchifunga kuti edza kuvapindura nekukurumidza uye kana iwe uchipindura vatengi, edza kuve nehunhu uye kutumira ruzivo rwekutevera kwavari.
Ongorora kuendesa kune vatengi
Iwe unogona zvakare chengetedza vatengi vako kuvandudzwa nezve kuendesa kwavo. Kwidziridzwa kune vatengi vako nekukurumidza kana iwo mamiriro ekutumira eodha yavo achinja. Mamwe maShopify mapurogiramu, akadai seAftership, Trackr, Tracktor anogona kukubatsira kugadzirisa mamiriro ekutakura.
Ita mutemo wekudzorera
Iri zvakare zano rakanaka kuita kuti mutemo wekudzorera ubudirire chaizvo izvo zvinowedzera kuvimba kwako kwevatengi kana mutemo wekudzoka wakataurwa zvakajeka pane peji yechigadzirwa. Nyoro tsanangura kuti iwe uchaita 100% kudzoreredza kana chigadzirwa chisina kuunzwa mukati menguva ino yenguva yemakumi matatu - mazuva makumi mashanu kana mazuva makumi matanhatu.
4. Govera Discount Yekunyanya Kunonoka
Kana paine kunonoka kwakakomba, iwe unofanirwa kupa mutero pane zvako wega izvo zvinogona kudzikisa zvichemo zvevatengi uye kunyange kuvafadza. Iko kune data iro 99.5% yezvichemo zvekutakura zvinogona kugadziriswa nenzira iyi. Uye kana vatengi vako vachikumbira kudzorerwa, tevera yako yakajairwa kudzoka uye refunds mutemo, pamwe nekupa dhisikaundi.
Tags aliexpress, cj kudonhedza, cjdropship, cjdropshipping, dropshipping, kudonhedza shopify, epacket, maitiro ekubata nenguva refu yekutumira, shopu kudonhedza
← Zvakajairika FAQ's paMabatiro Ekutanga Kudonhedza muEU → Ungawana Sei uye Sarudza Yakanaka Kudonhedza Vanopa?